China Factory Direct Supply Direct Ball Joint-Z12069 mpanamboatra sy mpamatsy | TANGRUI
Ny vatantsika dia voarindra amin'ny tonon-taolana maro. Ny tonon-taolana dia manampy antsika hihetsika amin'ny fomba mavitrika sy miovaova kokoa, ary io hetsika io dia manala ny vokany. Ny fitambaran'ny baolina dia toy ny fiatoan'ny fampiatoana fiara. Mifandraisa eo anelanelan'ny sandry sy ny knuckle.
Fa maninona no baolina?
Mba hifehezana ny fiara dia takiana fa ny kodia eo aloha dia azo soloina amin'ny làlana irina. Ny mekanika familiana dia ampiasaina hanodinana tsara ny kodiarana, ary fitaterana baolina ampiasaina hampifandraisana ilay cam rotary amin'ny lever. Ny fampiasana ny baolina mitambatra amin'ny fret dia ahafahan'ny fivorian'ny hub mihodina manodidina ny axis ary miaraka amin'izay dia manana fifandraisana malefaka amin'ny levers, izay tena ilaina amin'ny fiasan'ny fampiatoana.
Ny firafitry ny baolina mitambatra.
Samy hafa ny endrik'ireo akorandriaka baolina, saingy ny rafitra sy ny fitsipiky ny asany dia mitovy. Samy misy bearings baolina ambony sy ambany: rantsan-tànana misy kofehy (na lalan-drivotra) sy fitambaran-baolina, trano fonenana, kitapo polimerika, mpanasa lamba manidina ary fonony. Ary koa, ny tohana dia karazana mihorirana sy tsy azo sarahina. Talohan'izay dia matetika no namboarina ny fanamboarana ny bearings, dia ny fanoloana ny singa plastika. Ny fanamboarana toy izany dia namerina ny fanohanana ny hakitroky ny fihetsehana teo aloha. Saingy, ity fomba fanarenana ity dia tsy namerina ny fahamendrehana voalohany amin'ny mekanisma baolina, satria nosoloina ny singa polymer, ary nijanona ho antitra ny rantsan-tànana, ary mandritra ny fiasan'ity fametahana lava ity dia mety hamorona microcracks izay mety hitarika amin'ny fanimbana ny vy ary mamorona toe-javatra vonjy maika eny an-dalana. Bearings baolina maoderina ho an'ny fiara, mazàna dia matetika no ampiasaina amin'ny fampiasana rafitra mihahaka, ary aorian'ny tsy fahombiazana dia tsy maintsy soloina. Ary inona no hividy, ny ambony sy ny ambany bearings amin'ny fastener amin'ny vidiny mirary, ny fivarotana an-tserasera ny fivarotana kojakoja "Tangrui" dia hanampy anao, eo amboniny dia misy isan-karazany ny kojakoja ilaina sy ny fitaovana ilaina amin'ny vidiny manintona. Mba hanoloana ny fitifirana baolina amin'ny fiara Lada dia misy fiara eo alohany, any aoriana na amin'ny kodia rehetra, dia tokony hifandray amin'ireo matihanina, ny foibem-panompoana ianao, na raha manana faniriana sy fitaovana sasany ianao, dia azonao atao ny manamboatra ny fanamboarana rehetra.
Miaraka amin'ny fampidirana ny baolina mitambatra, ny singa fampiatoana fiara dia manana fihetsiketsehana maro karazana. Ny baolina mitambatra dia miasa mba hahafahan'ny faritra mihantona mihetsika amin'ny lalana maro, fa tsy amin'ny lalana iray ihany. Ireo hetsika ireo dia manaparitaka ny fiatraikany amin'ny fiara.
Tangrui dia manana eleTangruio deposition coating azo ampitahaina amin'ny OE level mba hisorohana ny harafesina hampihena ny faharetana.
■ Seza plastika
Tangrui dia mampiasa seza baolina plastika. Ny fahasimbana ambany amin'ny fikorontanana sy ny fiovan'ny torque sy ny fahazavana dia afaka mitazona ny fahombiazany lava.
■ Kavina matevina sy malefaka
Tangrui dia mampihena ny hamafin'ny baolina amin'ny alàlan'ny dingan'ny fandoroana, hahatonga ny baolina ho malama.
Izy io koa dia manana tanjaka avo lenta amin'ny alàlan'ny fametahana vy vy, fitsaboana hafanana ary fisolahana mangatsiaka.
Type Firaisana amin'ny baolina
Brand HO AN'NY OPEL
Previous: TangRui Oem Ball Joint ho an'ny OPEL-Z12068
Manaraka: Fitaovana fanaraha-maso aoriana ambany ambany ho an'ny BENZ-Z5130
Tyre Ball Joint
Hanara-maso Rod Ball Joint
Auto hiantra faritra mitambatra Ball Direction Machine D ...
Fiantohana kalitao ivelany baolina Joint-Z12054
China Factory Supply Suspension Parts Ball Manate ...
China Factory Car fampiatoana Part Ball Joint- Z ...
Shock Absorber Bolt, Hood Shock Absorber, Tyre Ball Joint, Knuckle familiana eo aloha, Hub misy kodiarana, Shock Absorber fingotra,